» टिकटकबाट स्टारहरुले कसरी पैसा कमाउँदैछन् ?
टिकटकबाट स्टारहरुले कसरी पैसा कमाउँदैछन् ?
२२ बैशाख २०७६, आईतवार ०६:२३
बीबीसी । भिकी बनहमलाई एकदिन एउटा अनौठो फोनकल आयो । वास्तवमा उनलाई डीजे सिगालाको नयाँ एल्बमको लन्च पार्टीमा लैजानका लागि एउटा मार्केटिङ कम्पनीले फोन गरेको रहेछ । यसपछिको केही दिनमै उनले स्पेनी टापुमा डिजेको छेउमा बसेर पार्टी गरिन् । उनी भन्छिन्, “यो अपत्यारिलो तर रोमाञ्चक क्षण थियो । मैले उक्त २४ घण्टामा धेरै रमाइलो गरेँ ।”
यसरी बनहामलाई सो कम्पनीले फोन गर्नु पछाडिको कारण टिकटक रहेको थियो जसमा उनका १३ लाख भन्दा धेरै फ्यानहरु छन् । चिनियाँ एप टिकटकको लोकप्रियता पछिल्लो समय अत्यन्तै ठूलो स्तरमा वृद्धि भइरहेको छ । यसरी उनको यात्राको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नु बाहेक कम्पनीसँग उनले कुनै औपचारिक सम्झौता गरिनन् भने उनलाई यसबारे उनको पोस्टमा शेयर गर्न समेत कुनै आग्रह गरिएको थिएन । उनी भन्छिन्, “उनीहरु केबल त्यो पार्टीमा एउटा टिकटक व्यक्तित्व चाहन्थे ।”
यसरी गत फेब्रुअरीमा मात्र टिकटक एप्पल र एन्ड्रोइडका स्मार्टफोनहरुमा एक अर्ब पटक डाउनलोड गरिएको एप बनेको हो । टिकटक २०१८ मै ६ करोड ६० लाखपटक डाउनलोड भएको थियो जुन त्यस समय इन्स्टाग्राम भन्दा २ करोड २० लाख धेरै हो । जसबाट पनि हामी सबै टिकटकको व्यापकताबारे स्पष्ट हुन सक्छौँ । यस्तोमा करोडौँ युवाहरुमाझ यसको लोकप्रियता अतुलनीय बन्दै जाँदा सबै विज्ञापनदाताहरुको टिकटकको प्लेटफर्ममा स्थान पाउने ठूलो सपना रहेको छ ।
लामो समयदेखि इन्सटाग्राम र युट्टयुब लगायतका प्लेटफर्ममा प्रभावशाली व्यक्तित्वहरुले फलोअरका आधारमै राम्रो कमाइ गरिरहेका छन् । के टिकटकमा पनि यो लागू हुन सक्छ ?
यसरी स्पन्सर गरिएका भिडियोहरु मार्फत टिकटकका स्टारहरुले पनि केही हद्सम्म कमाइ गर्न सक्ने बताइएको छ तर यो अन्य प्लेटफर्म भन्दा भिन्दै रहेको छ । ४० लाख फ्यान भएका स्पेनी कलाकार जाभी लुना भन्छन्, “युट्ययुबमा हाम्रो भिडियोले प्राप्त गर्ने भ्युजबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ तर टिकटकमा तत्काल यस्तो व्यवस्था छैन ।”
लुनाले गत २०१८ देखि मात्र टिकटकमा भिडियो पोस्ट गर्न सुरु गरेका हुन् । जसपछि उनको फ्यान फलोइङमा अत्यधिक वृद्धि भएको हो । उनी भन्छन्, “जब तपाईँका एकदमै धेरै फलोअर वा भिडियोका अत्याधिक भ्युज हुन्छन् , त्यसपछि विभिन्न ब्रान्डहरुले तपाईसँग काम गर्न चाहेको भन्दै इमेल पठाउन थाल्छन् ।”
यसरी टिकटक, जोस सेपहर्ड जस्ता नयाँ उद्यमीहरुका लागि पनि धेरै ठूलो अवसर साबित भइरहेको छ जसले टिकटक ट्यालेन्ट एजेन्सी खोलेका हुन् ।
उनको कम्पनीले टिकटकका शीर्ष १५ स्टारहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ र संयुक्त रुपमा तिनका १ करोड ५० लाख फ्यानहरु रहेका छन् । पछिल्लो सात महिनामा मात्र उनीहरुले ३५ वटा अभियान चलाएका हुन् र विभिन्न समारोहमा ती टिकटक स्टारहरुलाई पठाउने गरिएको छ जसका लागि प्रतिदर १,९३७ डलर प्रदान गर्ने गरिएको छ । अन्य सामाजिक संजालहरुको तुलनामा सो रकम एकदमै थोरै हो किनकी त्यही फलोअर युट्युयबको प्लेटफर्ममा भए कम्तिमा पनि ६५ हजार डलर कमाउन सकिन्छ । यसरी टिकटक युवाहरुको प्लेटफर्म भएकाले पनि कमाइमा यति ठूलो भिन्नता आइरहेको बताइएको छ । त्यस्तै अन्य प्लेटफर्मको तुलनामा टिकटक नयाँ र अपरीक्षित पनि मानिन्छ ।
तर टिकटक स्टारको कमाइमा अब केही समयमै ठूलो परिवर्तन देखा पर्न सक्ने भनिएको छ । किनकि कम्पनीले अब टिकटक भिडियो हेर्नेहरुको उमेरदेखि पहुँचसम्म सबै जानकारी प्रदान गर्ने बताएको छ ।
यसले ब्रान्डहरुलाई टिकटक स्टारसँग काम गर्ने निर्णयलाई अझ सहज बनाइदिने बताइएको छ । सेपहर्ड भन्छन्, “यसअघि हाम्रो भिडियो हेर्नेहरु कति उमेरका छन् भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो जुन ब्रान्डहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध रहँदै आएको थियो । तर अब कसैले २५ वर्षकाहरुलाई लक्षित गर्न चाहान्छ भने त्यसो गर्न सम्भव भएको छ ।”
टिकटकमा रहेको अटो प्ले अन्तर्गत एउटा भिडियो सकिएपछि तत्कालै अर्को भिडियो सुरु हुने गरेको हुँदा यसले दर्शकको थप ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ जुन युट्युबमा हुँदैन । यसलाई पनि विज्ञापनदाताहरुका लागि लाभदायक पक्ष मानिएको छ ।
यसरी टिकटक निर्माताहरुले पनि पछिल्लो समय विभिन्न विज्ञापनदाताहरुसँग सम्पर्क राखिरहेका छन् ।
जस्तै पछिल्लो समय टिकटकले स्पन्सर गरिएका ह्यासट्याग च्यालेन्ज विभिन्न ब्रान्डका लेन्सहरुको विज्ञापन गरिरहेको पाइएको छ । त्यस्तै थुप्रै ब्रान्डहरुले टिकटक स्टारहरुलाई आफ्ना उत्पादनबारे उल्लेख गर्न लगाइरहेका छन् ।
तापनि टिकटकले यसअघिका एपहरुको गलती नदोहोर्याउन आफूलाई सुस्त गतिमा अघि बढाइरहेको बनहान बताउँछिन् । तर धेरै पैसा कमाउन नसकिने भएपनि प्रयोगकर्ताहरुले टिकटकलाई अत्यन्तै राम्रो प्लेटर्फमका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
कोरोनाविरुद्धको खोप विकास गर्ने सबैभन्दा सानो मुलुक बन्दै क्युबा